Tallaabada ugu fiican RPG ee gothic leh Castlevania: Symphony of the Night | Androidsis
Waxaa jira ciyaaro iyo ciyaaro, ka dibna waxaa jira Castlevania: Symphony of Night, oo maalinteeda soo saarta ereyga Metroidvania taasina waxay dhiirrigelisay daraasiin ciyaaro tan iyo markii asalka uu yimid sannado badan ka hor Nintendo.
On Android, habka ugu sarreeya, waxay si fiican ugu qabataa wax kasta oo aan ka filan karno bayaankan weyn ee 'n slash platform'. Farshaxanka pixer halkan qaado marxaladda dhexe ee muuqaalka muuqaalka ah iyo dhinacyada farsamada ee tusaale u noqda kuwa kale oo badan, oo aan inta badan garanayn sida loola xiriiro ciyaartaas oo nagu qasbeysa inaan runtii xirfad u leenahay xakamaynta geesigeenna.
1 Ciyaarta caanka ah ee taxanaha Castlevania ee mobilkaaga
2 Khibrad uu Castlevania: Symphony of the Night bixiyo
3 Shaqo farshaxanimo ah oo ku taal calaacasha gacantaada
Ciyaarta caanka ah ee taxanaha Castlevania ee mobilkaaga
Laga soo bilaabo daqiiqadii ugu horeysay Castlevania: Symphony of the Night ayaa durba nagu soo jiidanaysa xiisaha leh dhawaaqa dhawaaqa iyo in jidka agtiisa, waxay u egtahay cabsi cabsi leh tayada codka oo lagu raaxeysan karo mobilada ugu dambeeya ee leh dhinacyadaas rikoodhada
Kadib ilbidhiqsiyadan ugu horreeya ee si buuxda kuugu quusaya khibrada ku sugaysa, waxaad qaadan doontaa geesigaaga loo yaqaan Alucard iyada oo loo marayo Castle Dracula ciyaar jilaa ah oo door-ciyaar ciyaar ah oo aad wajihi doonto boqolaal cadaw ah oo ka imanaya meelaha ugu hooseeya ee mugdiga ah.
Hadaan dhahno waji boqolaal Tani waa kiiska, maadaama hadaad istaagto, waxaad arki doontaa sida ay u soo baxaan midba midka kale ilaa ay ka qariyaan shaashadda. Taasi waa, waa inaad dhaqaajisaa dameerkaaga, illaa aad rabto inaad ku raaxeysato khibrada weyn ee lafteeda lafteeda kala duwanaanta aan ku leenahay, boodboodka iyo xirfadahaas xoogga leh ee uu Alucard ku dhex mari doono qolladaha ay ka buuxaan cayayaanka cadaabta.
Khibrad uu Castlevania: Symphony of the Night bixiyo
Castlevania: Symphony of Night waxay ku daraysaa kantarool ku habboon maanta iyo taas oo aan ku awoodi doonno inaan uga sii gudubno qolal kala duwan, dhammaantoodna si wanaagsan loo tarjumo oo mid walbaa tusaale u noqon karo waxa lagu sameynayo heer garaaf ee ciyaarta moobiilka.
Waxaan ku haynaa Alucard isbadalkiisa gaarka ah iyo firfircoonida weyn ee gacanta ku haysa. Wax walba waa in la sameeyo dhaqdhaqaaqyadaada si loogu raaxeysto waxa had iyo jeer lagu garto Konami weyn: Cayaaraha fiidiyowga ee balwadda leh oo aad u muhiim ah ciyaaraha. Halkan waxay gaysay awooddeeda oo dhan si ay u noqoto shaqo farshaxan ciyaarta fiidiyowga ah ee moobilkaaga Android.
Alucard wuu isbarbar dhigi doonaa tanina waxay u oggolaan doontaa inuu ku daro awooda cusub iyo sidoo kale inuu noqdo mid awood badan. Waxaa jira dhibco badbaadin, sidaa darteed waan sii wadi karnaa inaan ku baarno qalcaddii Dracula Madax gaar ah oo laga soo qaatay riyooyinki ugu xumaa. U fiirso iyaga, maadaama ay sharfaan waxa had iyo jeer ahaa runta "ugudambeeya". Mid ka mid ah kuwa uu jecel yahay inuu wajaho isla markaana taasi waxay noqoneysaa daqiiqaddaas ciyaarta.
Shaqo farshaxanimo ah oo ku taal calaacasha gacantaada
Castlevania: Symphony of the Night waa loo tarjumay dhowr luqadood, sidaa darteed waxaad ku haysataa Isbaanish si aad ugu qoyso taariikhdeeda oo dhan. Adduun mugdi ah ayaa ku sugaya inaad ku raaxeysato mid ka mid ah waayo-aragnimada ugu fiican ee ciyaarta doorka-doorka ee aan cidna la mid ahayn taasna waxay isku dhafan tahay noocyo kala duwan sida barnaamijyada Qaab muuqaal ah oo u gaar ah iyo kan farshaxanka pixel wuxuu muujinayaa xoog aad u weyn.
Farsamo ahaan waa sheeko-xariir iyo muuqaal ahaan waa ode ah oo loo sameeyay farshaxanka pixel. Faahfaahinta soo jiidaneysa dareenkeena waxaa ka mid ah waxyaabo muuqaal ah sida asalka leh lakabyadaas kala duwan oo soo saara saameyn weyn oo qoto dheer. Ama madaxdii ugu dambaysay ee loo qaabeeyey sidii in laga soo qaaday HP Lovecraft waana arrin aad u dhib badan. Waxaan sidoo kale la tagnay haybaddeeda codkeeda taasna waxay siineysaa heerkaas tayada si aan u sameyno mid ka mid ah waayo-aragnimada ugu wanaagsan ee ciyaaraha ee aad hadda ku heli karto mobilkaaga.
Castlevania: Symphony of Night ayaa timid si ay u muujiso waxa Metroidvania ugu horreeyay ahaa. Haddii aanad waligaa fursad u helin inaad tijaabiso cinwaanka Konami, hadda waxaad ku haysataa qaab qiimo sare ah iyo lacag keliya oo mobilkaaga ah. Waxaan kuu xaqiijin karnaa inaadan ka qoomameyn doonin. Adigana, haddii aad guriga joogayso ha ka maqnaan tan liiska weyn ee ciyaaraha multiplayer online.
Konami wuxuu ku bilaabay Castlevania hab aad u weyn si kuwa aan aqoon u lahayn taxanahan ay ku dhex arki karaan sida ay u weyn tahay farshaxanka pixel iyo waxa u ahaa ciyaar heer sare ah oo qoto dheer oo taabasho door ah. Muhiim u ah ciyaar kasta.
Codkeeda sharafta leh
Grandiosity xagga farsamada iyo muuqaalka ah
Saamaynta qoto dheer ee lakabyada kala duwan ee sawirka asalka ah
Istaroogyo kala duwan iyo isdhexgal weyn
Madaxdaada ugu dambeysa waa kuwo gaar ah
Awoodin in gacanta wax laga beddelo badhamada si loo wareejiyo
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Castlevania: Symphony of the Night, ciyaarta udhaxeysa ciyaaraha asal ahaan ka yimid ereyga Metroidvania
Ma ahan ciyaarta kaliya ee Castlevania. Waxaa jira mid kale oo bilaash ah ama loo yaqaan freemium laakiin meel walba ma tagin. Isku mid ayaa lagu gaari karaa apkpure.
Khiyaamo waxtar leh iyo barnaamijyo loogu talagalay Android